Ikhaya / Blog / Igumbi lokuhlambela elinye lanele, kutheni ufuna amagumbi okuhlambela amabini e-China?
2021 / 04 / 12 uhleloBlog 6987 0
Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela luluqeqesho olo
Nje ukuba kubekho uyilo olungenangqondo
iya kuchaphazela isalathiso solonwabo kubomi bemihla ngemihla.
Zisa iingxaki ezininzi ezingeyomfuneko.
Kwiintsapho ezinabantu abaninzi.
Ukuba akukho zindlu zangasese zimbini
Kuyimfuneko ukujongana nesenzeko sokuba
Phambi kokuba uvuke kusasa naphambi kokuba ulale ebusuku
Igumbi lokuhlambela liza kudibana neengxaki zentsasa nakusihlwa.
Kwinkqubo yokusetyenziswa okugxininisiweyo,
Igumbi langasese phantse lingenakugqitha kule ndawo.
Usapho luya kugxila ekusebenzeni kwesinki kunye nakwindlu yangasese.
Kukwakho nolayini wokuhlambela kunye nendlu yangasese.
Ukuphucula umgangatho wobomi bethu
umba wokwahlula okumanzi nokomileyo kuya kuthandwa.
Kodwa kuyacaca ukuba
Ukwahlula okumanzi nokomileyo ngaphandle kokwahlulwa kwendlu yangasese njengesiseko.
Makhe sijonge kulwakhiwo ngokubanzi lwendlu yangasese yasekhaya!
Ngokubanzi, ikhangeleka ngoluhlobo ……
Okanye ipateni yesikwere
Indawo yokuhlambela, indawo yokuhlambela kunye nendawo yangasese zilungiswe embindini kwindawo enye, kwaye ngumnyango weglasi kuphela wommandla wokuhlambela osebenza njengesahlulelo esilula, esifanelekileyo ukuba uhlala wedwa, kodwa sakuba sihlala abantu ababini ukuya kwabathathu kwaye kwenzeka ngokungqinelana nokukhawuleza kwasekuseni, omnye umntu uya kwindlu yangasese kwaye omnye kuya kufuneka alinde exhalabile.
Ewe kunjalo, ukuphucula ukusebenza ngokusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela, abantu abayithathanga isinki ezimeleyo yendlela. Kodwa ke ikwayiloo nto inye, ufuna ukuhlamba kakuhle, ngaphandle ukhwaza “Ndifuna ukuya kwindlu yangasese” ……
Kwaye lo mkhuba awulungelanga "ukwahlula okumanzi nokomileyo" - emva kokuhlamba amanzi kwigumbi lokuhlambela aya kuthatha ixesha elide ukuba anyibilike, amanzise indawo yangasese; Iibhaktheriya zangasese ziya kungcolisa iitawuli kunye nempahla yokuhlambela.
Ke, le ngxaki kufuneka isonjululwe njani? Makhe sibhekise kubulumko bokusebenzisa izindlu zangasese zaseJapan.
Iindidi ezintathu zegumbi lokuhlambela elahluliweyo
Okokuqala, amagumbi okuhlambela aseJapan ngokusisiseko asebenzisa "ukwahlula kathathu," ukwahlula iindawo ezintathu zokuhlamba, ukuhlamba nokuhlamba.
Nokuba luhlobo luni na lomzi, enye yezona zimvo zibumbeneyo kwaye zibalulekileyo zoyilo kukuba igumbi langasese lizimele! Ayichaphazeli kuphela ukusebenziseka okupheleleyo kokusetyenziswa, kodwa ikwazimele kwezinye iindawo.
Ewe ezinye iintsapho zikwabandakanya igumbi lokuhlamba impahla, ukuze "iintlobo ezintathu zokwahlula zibe" ziindidi ezine zokwahlukana ". Kwindawo enye, ibhafu, ibhafu yokuhlambela, igumbi lokuhlamba kunye nendlu yangasese zidityanisiwe kwaye azichaphazeleki.
Uncedo lolo lwakhiwo kukuba lwenza umgca odibeneyo, osombulula ngokufanelekileyo ukusikelwa umda kwendawo encinci yekhaya kwaye uhlangabezana neemfuno zokusetyenziswa okungafaniyo kosapho.
Ukulungiswa kwegumbi langasese elizimeleyo laseJapan, kungekuphela nje indawo encinci yokuba umzimba ujike ngokukhululekileyo, kodwa kunye nokulungiselela iirowder zephepha, iitawuli, izipili, kunye neesinki, ezenza inkonzo yangasese yokumisa.
Ukurola kabini kwetawuli yephepha ekufakweni kwezahlulelo, ezifanelekileyo ekubekweni kweeselfowuni okanye ezinye izinto ezincinci, zibonisa iinkcukacha zokhathalelo "olunobuntu".
Ngokuhambelana nomgaqo wokungachithi ndawo, isahlulelo sokugcina emva kwendlu yangasese sinokusombulula iingxaki zokugcina eziyimfuneko.
Ukusetyenziswa kwamanzi ahlaziyiweyo ukugungxula indlu yangasese ayigubungeli indawo encinci kuphela, kodwa kukwayindlela enobume yokusingqongileyo neyonga umbane.
Ke, yintoni eyothusayo abayili baseJapan yile: kutheni sifuna izindlu zangasese ezimbini eTshayina?
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokucwangcisa igumbi lokuhlambela, kodwa umbono ngamnye omtsha ujolise ekuphuculeni umgangatho wobomi wabantu. Logama nje usophula ukucinga okungqongqo, ngokwemikhwa yobomi yoyilo olusengqiqweni, kukhululeke ngakumbi ukuyisebenzisa!
Ngaphambili :: Igumbi lokuhlambela endlwini, khetha ukuba ungene kwigumbi langasese lodonga? Okanye iNdlu yangasese yoMgangatho? next: Kutheni le nto amagumbi okuhlambela abanye abantu ehlala ekhangeleka emhle kangaka?